Trump 2024? စစ်တမ်းအသစ်ကသူသည် GOP အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
နိုဝင်ဘာလ 25, 2020 နိုဝင်ဘာလ 25, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန် Donald Trump, အသားပေးသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး, ရီပတ်ဘလီကန်
စစ်တမ်းအသစ်တစ်ခုတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောရီပတ်ဘလစ်ကန်အများစု (၅၄ ရာခိုင်နှုန်း) ကမူ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်သမ္မတ Trump အတွက်မဲပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ Mike Pence သည်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး GOP မဲဆန္ဒရှင်များအကြား ၁၂% ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။
သမ္မတ၏သား Donald Trump Jr. သည် ၈% အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးလောကတွင်လေးနှစ်ထာဝရတည်ရှိသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ အမေရိကန်နိုင်ငံရေး၏သဘောသဘာဝမှာတိုင်းပြည်သည်အမြဲတမ်းအမည်ခံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရာသီဥတုတစ်ခုတွင်နေထိုင်သည်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူလေးနှစ်ကွာဝေးသောလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၏သမ္မတစံချိန်စံညွှန်းမီသူမည်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုခန့်မှန်းပြောဆိုမှုများအလွန်များပြားနေသည်။
ထိုမေးခွန်းကိုနို ၀ င်ဘာ ၃ ရက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပထမအကြိမ်စစ်တမ်းတွင်ရှုထောင့်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ရီပတ်ဘလီကန်များအား ၂၀၂၄ ရီပတ်ဘလီကန်သမ္မတမူလတန်းတွင်မည်သူထောက်ခံလိမ့်မည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းတွင် Donald Trump သည်အဓိကအကျဆုံးနေရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုရလဒ်အရကော်မရှင်ကစစ်ဆေးသည် Morning Consult and Politico, ရီပတ်ဘလီကန်ဖြေဆိုသူ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းကမူမဲပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump ဒုတိယသမ္မတ Mike Pence သည် GOP မဲဆန္ဒရှင်များအကြား ၁၂% ထောက်ခံမှုဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ သမ္မတ၏သား Donald Trump ဂျူနီယာ ဖြေဆိုသူထံမှ 8% ထောက်ခံမှုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခြားအမည်များမှာအထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz (R-TX)၊ ၄%၊ တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး Nikki Haley သည်လည်း ၄%၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရီပတ်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်လက်ရှိအထက်လွှတ်တော်အမတ်မစ်ရွမ်နေ (R-UT) တို့မှာ ၃% ဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ၃ ယောက်ကဖြေဆိုသူကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့“ တစ်စုံတစ် ဦး” ကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။
Trump 2024 ခုနှစ်တွင်ထပ်မံ run နိုင်သလား?
အဘယ်အရာကိုမျှဤနံပါတ်များကိုအနာဂတျမှာထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြပေမယ့်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Trump နေဆဲရီပတ်ဘလစ်ကန်အကြားယနေ့လူကြိုက်များရိုးရှင်းစွာအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရီပတ်ဘလီကန်အခြေစိုက်စခန်း၏ထောက်ခံမှုသည်ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်များသည်ရွေးကောက်ပွဲ၏နောက်ဆုံးရလဒ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
Biden ရုံးယူဆလျှင်နည်းပညာပိုင်း, Trump သူသာသက်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သောကြောင့်, သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်နောက်တဖန် run ဖို့အနေအထား၌တည်ရှိ၏။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်အသက် ၈၀ အရွယ်ဖြစ်လိမ့်မည် (အသက် ၇၈ နှစ်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်သက်ကြီးရွယ်အိုအသက်အရွယ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်တစ်ခါတွင်အသက် ၇၈ နှစ်သာရှိသေးသည့်ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်ရာထူးကိုရယူရန်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်။
တူညီတဲ့စစ်တမ်းမှာလည်း Biden ဟာအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုစွဲမှတ်စေနိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်မဲဆန္ဒရှင်များအနက်သူ၏ထောက်ခံမှုနှုန်းသည် ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးရီပတ်ဘလီကန်မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။
အုပ်စုခွဲမှုလျော့နည်းလာပုံရသည့်ပြissueနာတစ်ခုမှာဘီဒင်၏ပထမဆုံးရုံးရက်ပေါင်း ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ တိုင်ပင်သူ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကအုပ်ချုပ်ရေး၏ပထမဆုံးရက်များတွင် coronavirus သည်အဓိကပြissueနာဖြစ်သင့်သည်ဟုသဘောတူကြသည်။ အလားတူပင်စစ်တမ်းကောက်ယူသူ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းကကူးစက်ရောဂါအတွက်စီးပွားရေးအကူအညီအထောက်အပံ့အသစ်ကိုဆွေးနွေးသင့်ကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုကိုပြည်နယ်မူဝါဒတစ်ခုအဖြစ်သဘောတူရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
အများပိုင်သတင်း Donald Trump ဂျိုးဘိုင်ဒန် သူ Mike Pence ရီပတ်ဘလစ်ကန်
ဤအရာ ၇ ခုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးထိပ်များသိပါ